Cudurka Ebola Oo Laga Walaacsanyahay In Uu Ku Faafo Dalal Ay Ka Mid Tahay Somaaliya |
Cudurka Ebola Oo Laga Walaacsanyahay In Uu Ku Faafo Dalal Ay Ka Mid Tahay Somaaliya
“Cudurkan waxa uu Uganda uga yimid dhanka dalka Congo, madaama Soomaaliya-na ay dad badani uga yimaadaan dhanka Uganda oo isugu jira arday iyo ciidmada AMISOM, waa suurto gal in cudurkaas uu u gudbo Soomaaliya”. Ayuu yidh Cabdi Qani
Tallaabooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah in la baaro dadka ka imaanaya dalalka cudurkaas lagu sheegay iyo in la helo tallaalkii loogu talagalay oo ay bixiso hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO.
“Waa in la helo meelo lagu karantiili karo laguna daawayn karo dadka uu cudurkaasi ku dhaco, Waana in la yareeyaa isbaddalka ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda” ayuu yidhi Cabdiqani Sheekh Cumar.
Lahaanshaha sawirkaBSIP/GETTY IMAGES
Sida uu BBC-da u sheegay Dr Maxamuud Sheekh Maxamed Oomaar cudurkaan ayaa waxaa calaamadihiisa ka mid ah “Dhiig qofka ka furma meelaha daloola sida: sanka, afka, dabada iyo indhaha”.
“Cudurkan waxa uu u eg yahay cudurrada qandhooyinka balse waxa uu dheeryahay dhiig ka furma meelaha daloola.” Ayuu yidhi Dr Oomar.